Oromo News 05.10.21 | KWIT
Oromo News 05.10.21
By Fatiya Adam • May 10, 2021
Oromo News 05/10/2021
Lakkoofsi nama Covid-19 qabamu State Siouxland sadiin keessati gad xiqqaatu jira.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka mullisutti namni haarawa sababa Covid-19 due kan hin jirre yoo tau namni haarawa qabame ammoo 100 ol dha. Woodbury County keessati namni haarawa qabame akka hin jirre himan.
Woodbury County keessati qorannoo bulti 14 keessati godhame parsantii dhaan yoo kaahamu 3.3% akka tae himan, akka state guututi gimmaasha isaa akka gad xiqqaa tae himan. Sioux City keessati namni corona virus qabame saddeet yaalamu jiran. Waliigalatti namni Woodbury County keessati due 228 yoo tau namni 82 Dakota County keessati namni haarawa 9 ammoo har’a dabalame jira fi qoranno bulti 7 godhame irrati 3% dha. Nebraska ammo guyyaadhan namni 186 kan qabamuudha.
Kuni kanumaan osoo jiru, South Dakota keessati namni qabamu gad xiqqaata deemu dhufee jira, namni tokko kan due fi namni haarawa qabame 77 dha.
Iowa federal government jalatti $billion 1.5 state corona virus midhaman qarqaarudhaf kan argatteedha. Wayta dhukuba dalagaadhan bade bakkati deebisuuf tax irrati galii baaye gad xiqqaate guutudhaf kan kennamedha.
Nebraska $billion 1 kan argattu ta’a.
Lakkoofsi jiraattoota Nebraska umriin isaani guddaa tae qixxeen isaani talaali corona virus kan fudhtani iran akka tae kan mullisuudha. Talaali million 1.5 tae nama umriin isaa 16 fi sanii ol tae hundaayu kenname akka jiru himan. Talaali kennuu biyyati guututti kan mullisu yoo tau garuu wayta duraa irra talali kana fudhachuun xiqaata dhufu jira.
Oromo News 05.07.21
By Fatiya Adam • May 7, 2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa nama 18 haarawa dabalataan akka covid-19 duan himan, namni 400 haarawa kan qabame yoo tau kana keessa namni sadihii Woodbury County keessayi.
Lakkoofsi nama qabameefi nama due seaati 24 keessati kan tae miti state kan yeroo biraas itti dabaluu waan maluf.
Yeroo ammaati namni 190 ta’an sababa corona virus kan hospitaala keessati yaalama jiran yoo tau namni 5 amoo hospitaala Sioux City keessa kan jiraniidha.